가게 선택 | Myanmar | yathar
1659 shop 1974 review
Pyinmana, Nay Pyi Taw
The Milk Bar (Drinks & Desserts)
Free Delivery in Sanchaung, Kyeemyindaing and Ahlone townships. For other townships, the delivery fee will be 1,500 kyats. ဒိန်ချဉ်၊ ဖာလူဒါ၊ ဒိုမီနို၊ နို့အေးနှင့် ကူလ်ဖီး အစရှိသော နွားနို့ဖြင့် ပြ...
ေရႊဖူး Restaurant Bbq and Bar
Tian Xiang Hot Pot
Thin Pyant Mhwe Mala Shan Gou
Hotpot buffet , Mala Xiang Guo & Other Menu
My Hill Coffee House
စားသုံးသူမိတ်ဆွေများနှစ်ခြိုက်စွာစားသုံးကြတဲ့ကျွန်တော်တို့ 'My Hill' မှစားသုံးသူမိတ်ဆွေတွေကို အာဟာရပြည့်ဝပြီး အရသာရှိတဲ့အစားအသောက်တွေနဲ့ တနေ့တာကို ဖြတ်သန်းစေချင်တာ ကျွန်တော်တို့ 'My Hill' ရဲ့ စေတနာ...
Yadanarpon Tea Bar
We are temporarily closed!
3 Clan Smoked Steak Myanmar